Dulmarka Shirkadda - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa dhismaha warshada E6, sayniska warshadaha iyo teknolojiyada Park, Degmada Xixiu, Liangliu Road, Xixiu Degmada, Anshun City, Gobolka Guizhou, oo daboolaya aag 3200 ㎡, oo leh 409 ware bakhaar wax soo saar, waxaan leenahay 2000 2000 aqoon isweydaarsi iyo xafiiska 420 ㎡ iyo aagga ay degan yihiin. Shirkadeena waa shirkad isku dhafan R & D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta. Waxaan go'aansaneynaa inaan siino macaamiisheena adeegga ugu fiican.
Kuweena shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista maaskaro FFP2 ah, maaskaro FFP3, maaskaro ilaalin shakhsiyeed oo loo yaqaan 'kn95', maaskaro qalliin caafimaad, maaskarada madaniga ee la tuuri karo, waxaan leenahay wax soo saarkeenna gudaha ee u gaarka ah ee aqoonta caafimaad, waxaan ka soo gudubnay heerarka imtixaanka gudaha Gb2626-2006, heerarka shisheeye en149, en 14683, CE, iwm.
Theshirkaddu waxay mideysaa R & D, naqshadeynta, sumadda iyo wax wada iibinta si ay u noqoto shirkad caan ka ah adduunka. Marka laga eego aragtida tiknoolajiyada fiber-ka, waxaan ku soo galaynaa warshadaha caafimaadka waxaanan ku siinaynaa laba waji oo waji ah oo la tuuri karo iyo maaskarada kn95, maaskaro FFP2, maaskaro FFP3 loogu talagalay bulshada.
Shirkadda 'Shun AKF Medical Technology Co., Ltd.waa ganacsi ku cusub maaskaro,
Laga soo bilaabo xulashada iyo iibsashada qalabka ilaa nashqadeynta baakadaha, iyo xulashada mashiinnada, iwm, waxaan go'aansaneynaa inaan noqono kuwa ugu fiican warshadan.
Anagawaa inuu hubiyaa in maaskaro kasta oo aan soo saarnay ay ugu fiican tahay warshadan. U ogolow isticmaale kasta oo maaskarada AKF inuu heli karo
ilaalinta ugu fiican.
Athadda, waxyaabaha maaskaro ee Runbo ayaa laga helay dalal iyo gobollo badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Yurub, Mareykanka, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Australia, Ruushka, Hong Kong, iwm. Waxay door muhiim ah ka ciyaartay muddadii uu socday cudurku, waxaana rajeyneynaa in macaamiil badan oo xirfadlayaal ah oo dal iyo dibadba ay ku kalsoonaan doonaan astaanta Runbo. Waxaan sidoo kale idin rajeyneynaa guul dhamaantiin ee ladagaalanka cudurka faafa!
Xiriiriyeyaasha la xiriira ：